Taliska NISA ee oo helay Xog ku saabsan Saraakiil ka tirsan Al-shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Taliska NISA ee oo helay Xog ku saabsan Saraakiil ka tirsan Al-shabaab * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 6th April 2021
Taliska Sirdoonka iyo Nabad Sugida Gobalka Banaadir ee NISA ayaa helay xog ah in ay dhinteen laba Sarkaal oo Al-Shabaab u qaabilsanaa dhibaareynta Shacabka Gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta Qaraxyada iyo Miinooyinka.
Maxamuud Goobe Raage Jiisoow (Daariq) oo Al-Shabaab u qaabilsanaa Howl-galada Qaraxyada Miinooyinka Gobalka Banaadir iyo Shabeelada Hoose iyo Muuse Kooble oo isna qaabilsanaa Qaraxyada Miinooyinka Gobolka Banaadir, kana hooseeyey Daariq iyo 6 oo kale oo Miinooyin ka soo qaaday deegaanka Tooratooroow ayay 28-03-2021 kula qaraxday deegaanka Basro ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dhanka kale 03-04-2021 Daariq, waxaa lagu dilay dagaalkii Deegaanka Bariire ee gobolka Shabeella Hoose ay Ciidanka xoogga dalka jab xooggan ku gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Ha’yaddaha Amniga Gobalka Banaadir ayaa uga mahad celinayay geesiyaasha Ciidanka xoogga dalka oo helay xogta Al-shabaab ee ku aadan dabargoynta Ummadda Soomaaliyeed ugana hor tagay si geesinnimo leh isku deygooda, iyagoona xaqiijiyey awoodda iyo kartida ay u leeyihiin badbaadinta Shacabka Soomaaliyeed.